Mitarika ekipa marketing nomerika - ny fanamby sy ny fomba hihaonana amin'izy ireo | Martech Zone
Amin'ny teknolojia miova ankehitriny, ny fitarihana ekipa marketing nomerika mahomby dia mety ho fanamby. Miatrika ny filàna teknolojia mahomby sy mahomby ianao, fahaiza-manao marina, fizotry ny varotra azo atao, ankoatry ny fanamby hafa. Mihabe ny fanamby rehefa mitombo ny orinasa. Ny fomba fikirakiranao ireo olana ireo dia mamaritra raha toa ka hiafara amin'ny ekipa mahomby izay afaka mahafeno ny tanjon'ny varotra an-tserasera amin'ny orinasanao ianao.
Fanamby amin'ny ekipa nomerika nomerika sy ny fomba hihaonana amin'izy ireo
Manararaotra teti-bola ampy
Iray amin'ireo fanambin'ny mpitondra marketing ny fahazoana vola ampy atokana ho an'ny hetsika ataon'izy ireo. Nanjary sarotra kokoa izany rehefa tsy afaka manaporofo ny lanjany na ny ROI mifanaraka amin'ny vola laniana amin'ny marketing nomerika. Matetika dia voatery miasa amin'ny teti-bola ambany ny mpivarotra, kanefa takiana izy ireo mba hahatratra ny takiana amin'ny orinasa.
Inona no azonao atao? Atombohy amin'ny fanisana ny ROI anao. Mila manana rafitra napetraka ianao afaka hanara-maso ny hetsika ara-barotra sy ny valin'ny varotra mifandraika amin'izany. Ampiasao ireo mba hanehoana ny fomba nanatanterahan'ny tsirairay ny asanao nandritra ny fotoana manokana. Izy io dia porofo manamarina fa ny ezaka ataonao amin'ny varotra dia mitondra vokatra tokoa ho an'ny orinasa. Hamarino tsara fa manana tetikady marketing dizitaly ianao matoky fa afaka mitondra ROI tsara. Ny fahombiazana azo tsapain-tanana amin'ny paikadinao dia azo antoka fa hisarika famatsiam-bola bebe kokoa tsy misy fanoherana.
Famantarana ny haitao mety sy hitazomana hatrany miaraka amin'ny fanovana
Miova haingana be ny teknolojia. Ho an'ny maro, ireo fanovana ireo dia manakorontana. Ankoatr'izay, ny mpitarika marketing sasany dia mety hahatsapa fa tsy vonona ny hiatrika fanovana toy izany. Manomboka amin'ny sehatra marketing sy fomba fanao tsara indrindra amin'ireo sehatra ireo ka hatrany amin'ny fitaovana fitantanana; ireo rehetra ireo dia mitazona ny mpivarotra eo amin'ny rantsan-tongony rehefa miezaka ny hitazomana hatrany.
Ankoatr'izay, zava-dehibe ihany koa ny fananana haitao mahitsy hitantanana ireo ekipa ary hampandeha tsara ny fampielezan-kevitra. Mampalahelo fa mety ho sarotra amin'ny mpitondra marketing nomerika ny mamantatra ireo fitaovana teknolojia mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa. Ny ankamaroan'ny fitaovana misy dia zara raha nanangona tsikera ampy izay afaka manampy ny mpitarika toy izany hamantatra raha ny rafitra no ilain'ny orinasany.
Mba hanampiana anao hiatrika an'io fanamby io dia ireto misy singa manasongadina izay mahomby rehetra fitaovana fitantanana ny tetikasa tokony hitady ny mpitarika ny ekipa:
Fitantanana asa - Ho an'ireo mpitarika ekipa mitantana tetik'asa maro dia ho hitanao fa mora kokoa ny miasa miaraka amin'ny fitaovana fitantanana izay afaka mandamina sy manivana ny asa samihafa amin'ny tetikasa tsirairay na amin'ny daty sy ny olona, ​​na toa izany. Amin'ny fitaovana toy izany dia tsy mila fitaovana na rindrambaiko hafa isaky ny tetikasa ianao. Tokony ho afaka hanohana ny fizarana rakitra, fanavaozana ny tetikasa, ary ny fampahalalana hafa momba ny fotoana tena izy.
Fiaraha-miasa amin'ny ekipa - Izay ekipa nomerika mahomby dia tokony hifampiresaka tsara mba hiaraha-miasa. Rehefa mandinika fitaovana fitantanana tetik'asa ianao dia tadiavo raha manana fampidiran-dresaka toy ny chat, hafatra eo noho eo, mailaka, fivorian'ny video, sy ny hafa hanamorana ny fifandraisana tsy tapaka mandritra ny asa hitazomana ny mpikambana rehetra amin'ny pejy iray ihany.
Fanarahana fotoana - Amin'ity endri-javatra ity dia azonao antoka fa afaka manara-maso foana ianao raha mandany ny fotoanany amin'ny laharam-pahamehana ny mpikambana ao amin'ny ekipanao. Tsy matahotra ianao sao very fotoana na mandoa adiny iray izay tsy miasa.
Faktiora - Izy io dia miara-miasa amin'ny fampiharana fotoana mba hahazoana antoka fa voaloa ny fifanarahana mandritra ny fotoana lanin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa amin'ny tetikasa. Izy io dia miaraka amin'ny pikantsary mba hanehoana izay tena mpikambana iray dia niasa isaky ny adiny iray voaloa. Ny fanafainganana ny asa miverimberina manokana, toy ny famoronana faktiora ao anatin'ny iray minitra, dia mety hampitombo ny vokatra ary hampihena ny fotoana laniana amin'ny fitantanan-draharaha.
Mahita sy manakarama talenta mety
Ny fanomezana loharano, fandraisana mpiasa ary fitazonana ireo mpiasa marina dia fanamby iray hafa atrehin'ireo mpitarika marketing nomerika maro ihany koa ankehitriny. Indray mandeha, miaraka amin'ny teknolojia miova, dia miteraka fangatahana ho an'ny mpivarotra izay mamorona sy mahay tsara amin'ny teknolojia. Mpivarotra marobe no tsy miditra an-tsehatra haingana hahazoana ny fahaizana ara-teknika hametrahana azy ireo amin'ny toerana hamenoana ny banga mitombo.
Ary koa, raha misy mitady ny fahaiza-manao tadiavina dia lasa fetra hafa ny resaka tetibola voalaza tetsy aloha. Rehefa miakatra ny fangatahana ho an'ireo mpivarotra manan-talenta, dia toa handoa vola ambony kokoa izy ireo. Izay orinasa tsy manana teti-bola voafetra dia mety ho lafo be ny manakarama sy mitazona izany olona izany.
Raha te hamaha ity olana ity amin'ny fomba mahomby ianao dia manomboka amin'ny famantarana ny karazan'olona ilainao amin'ny ekipa marketing anao. Raha mila mikarakara ny SEO anao izy ireo, marketing amin'ny media sosialy na marketing amin'ny atiny, dia alao antoka fa manana ireo fahaiza-manao rehetra ireo izy ireo.
Androany, tsy mila mitazona mpiasa toy izany ianao ao amin'ny toeranao. Afaka manakarama matihanina virtoaly ianao; hetsika izay hampihena ny fandanianao miasa. Raha vantany vao hitanao izay antenainao hataon'ilay matihanina na manatanteraka azy, manorata famaritana asa amin'ny antsipiriany sy mazava ary apetraho amin'ny forum misy ny mpivarotra dizitaly.
Ohatra, inbound.org, LinkedIn, ary CareerBuilder.com dia nanaporofo sehatra tsara hahazoana talenta tena tsara na aiza na aiza eran'izao tontolo izao. Azonao atao ny manadihady kandidà maromaro ary misafidy iray izay mampiseho ny fahaizana mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famaritana ny asanao.
Noho ny haitao mivoatra sy ny orinasa mitombo, ny ekipa mpanofana mba hanaraka hatrany ireo fiovana ireo dia hametraka fanamby amin'ireo mpitarika marketing nomerika maro. Mety ho lafo koa izany amin'ny resaka fotoana sy vola. Koa satria tianao ny ekipanao hahomby amin'ny asany, ireto torohevitra ireto dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny enta-mavesatra;
Tombano ny fahombiazan'ny tsirairay an'ny ekipa tsirairay. Ny tsirairay dia samy manana ny tanjaka ananany izay azonao ampidirina rehefa manankina asa ianao mba hahitana izay tsara indrindra avy amin'izy ireo. Mandritra ny fanombanana, tondroo ireo faritra malemy izay mety mila coaching ary jereo ny fomba ahafahanao mandrindra izany.
Jereo hoe aiza no misy ny ekipanao amin'ny lafiny fahaizana. Misy ve ny fampianarana an-tserasera azonao atolotra ho azy ireo hanohizana ny fahaizany? Raha ny marina dia maro ny ekipa marketing an-tserasera azo ampiasaina maimaimpoana.
Farany, mbola mila drafitra fanofanana matotra ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa vaovao ianao. Rehefa mampahafantatra azy ireo ny adidy vaovao sy ny orinasanao izy ireo, azonao atao ny mamaritra ny tanjona voafaritra tsara amin'ilay toerana ary manasa azy ireo haneho ny fahaizan'izy ireo mahatratra izany.
Amin'izay voalaza rehetra izay dia mety hanatsoaka hevitra isika fa ny fitarihana ekipa amin'ny tetikasa marketing dizitaly dia iharan'ny fanamby lehibe ankehitriny mihoatra ny taloha. Ny ho avy dia tsy mitondra fironana hampihena ity tsindry ity.
Isika rehetra dia mila manandrana ny fetrantsika ary manome izay faraherintsika hiaraha-miasa amin'ny ekipa. Na ireo tetikasa izay toa mora amin'ny fahitana voalohany aza, dia mety ho sarotra be. Fanamby tena sarotra ny fandaminana ny lahasa, ny mpikambana ao amin'ny ekipa, ny mpamatsy vola avy any ivelany ary ny mpanjifa.
Fa ny fampifandraisana olona dia tsy faran'ny tantara. Mba hitarihana tetikasa iray misy fikorianan-javatra tonga lafatra dia mila fomba intuitive ianao hizarana hevi-baovao, fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny workflow, fanaovana tatitra ary maro hafa.
Izany rehetra izany dia mitondra antsika amin'ny fehin-kevitra fa tsy mora ho an'ny mpitondra foana ny mandanjalanja amin'ny tetikasa. Raha manana maso ivoho marketing ianao, mitarika ekipa mpamorona na mpamorona, na raha vao mahita fanombohana miaraka amina namana vitsivitsy ianao - raha tsy mampiasa fitaovana fitantanana tetik'asa ianao dia mety ho fahadisoana lehibe izany.
Sarobidy ny fotoanao. Mifantoha amin'ny zavatra tsara indrindra ataonao sy amin'ny zavatra tsy vitan'ny rindrambaiko iray. Avelao ny rindrambaiko hanao izay azony atao nefa miaraka amin'izay, tandremo fa tsy misy fitaovana toy izany izay hanao ny asa rehetra ho anao. Ny ankamaroan'ny fitaovana dia mbola toy izany ihany - fitaovana. Miankina amin'ny fomba fampiasana azy ireo dia mety ho lasa tombony amin'ny fifaninanana na fandaniam-potoana izy ireo. Anjaranao ny mamoaka ny mety aminy.
Midira maimaim-poana mandritra ny 30 andro ao amin'ny ActivCollab!
Tags: activcollabfaktioran'ny maso ivohofotoana fiasan'ny masoivohobillingrindrambaiko fiaraha-miasaHafanàm-po an-barotrafiaraha-miasa amin'ny marketing nomerikafanaramànafandraisana talentafaktioraFanofanana marketingfitantanana tetik'asarindrambaiko fitantanana tetikasasaasrindrambaikofitantanana asafiaraha-miasa amin'ny ekipafotoana fitantananafanarahana ny fotoana